Mety hisy vanim-panala kely ve? | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Mety hisy vanim-panala kely ve?
Monica sanchez | | mialoha
Fanontaniana iray izay mazava ny valiny ho an'ny ekipa mpahay siansa anglisy. Tamin'ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny diary »Astronomia & Geofisika» maminavina vanim-potoana Ice kely mety ho manodidina ny 2030.
Raha tsy misy fisalasalana, raha hitranga izany dia ho karazana famonjena ho an'ny zanak'olombelona ary koa ho an'ireo karazan-piainana hafa misy eto, amin'ny planeta miha maresaka.
Tamin'ny 2021 dia afaka nilatsaka ny mari-pana, araka ny maodely matematika momba ny hetsiky ny andriamby masoandro izay nampiasain'izy ireo ho an'ny fianarana. Ny mpahay siansa dia naminavina ny fihenan'ny onja andriamby mandritra ny tsingerin'ny masoandro telo. Ity fihenan-tsasatra ity dia mifanaraka amin'ny vanim-potoana mangatsiaka eto an-tany, ary fantatra amin'ny anarana hoe "Maunder Minimum", vanim-potoana izay tsy dia nisy pentina intsony ny masoandro.
Valentiza Zharkova, mpampianatra ao amin'ny University of Northumbria, United Kingdom, dia naminavina "Minimum" na vanim-potoanan'ny Ice kely vaovao amin'ny taona 2030, izay haharitra 30 taona koa izany vokatr'ilay hetsika maizika ambany an'ny kintana mpanjaka.
Tsy sambany nisy zavatra toa izao. Nijaly tamin'ny ririnina mangatsiaka sy mafy i Amerika Avaratra sy Eropa. Ny fotoana farany dia tamin'ny taonjato faha-50 ary naharitra 60 ka hatramin'ny XNUMX taona. Tamin'izay, Nivadika be ny reniranon'i London Thames, rehefa tsy mangatsiaka izany. Na izany aza, afaka miabo isika.
Raha marina ny faminaniana, maro amintsika no ho sahirana, indrindra raha mangatsiaka be isika; fa tsy misy isalasalana fa ho fofon'aina madio izy, ary tsy hiteny intsony, ho an'ny Tany. Miakatra ny mari-pana sy ny haavon'ny fandotoana, ny Ice Age dia mety ilain'ny planeta hamerina ny fifandanjana ilainy fatratra (raha ny marina, ilaintsika) ka mandeha araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Meteorolojia amin'ny tambajotra » mialoha » Mety hisy vanim-panala kely ve?
Ny fanala ny lanezy dia afaka manampy amin'ny fiovan'ny toetr'andro
Ny fifandanjana ny fahasimbana ateraky ny tafiotra Bruno